Ogige ntụrụndụ Dubai & ebe ntụrụndụ | Ihe nkiri na-adịghị agwụ agwụ-Ihe ntụrụndụ maka ezinụlọ dum
Ị nọ na obi ụtọ? Kedu maka ihe ngosi ịgba agba agba, ịnya igwe adrenaline, na ihe nkiri na-atọ ụtọ maka ezinụlọ dum? Ya mere, ọ dị ka ị nọ n'ọnọdụ Dubai Parks na Resorts.
Na -agbasa ihe karịrị nde square iri abụọ na ise (ihe dịka otu obere obodo), Ogige ntụrụndụ na ebe ntụrụndụ Dubai bụ ebe a na-enwe ọmarịcha ogige atọ na otu ogige mmiri na-asọ mmiri. Nke kachasị mma, ogige ntụrụndụ ọ bụla, mmasị, ịnya ụgbọ ala, na mpaghara ejiriwo ụfọdụ ihe nkiri na ihe egwuregwu ụmụaka kacha amasị n'ụwa, site na The Smurfs ruo Kung Fu Panda, Madagascar ruo Egwuregwu Agụụ, na ọbụna ihe nkiri Bollywood a ma ama nke masala, Dabangg . Ebe a na-aga bụkwa ebe obibi nke mbụ mpaghara ahụ Lego® ntụrụndụ ntụrụndụ na ogige mmiri.
Ghosts ndị na-agbawa agbawa, jiri nri buru ibu karịa ndụ, gaa na naanị ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'ụwa maka nnukwu anụ mmiri, soro dragons fega, gaa njem 4D nke Panem, sonye na Zoosters na nchụso ara na ya mere, ọtụtụ nọ na MOTIONGATE ™ Dubai. . Ndị nta, ndị buru ibu na ndị na-ajụ obere ka a ga-emebisị maka nhọrọ na-akpali akpali ka ha na-enyocha ihe nkiri imikpu, ihe juru na adrenaline na DreamWorks, Columbia Pictures, Lionsgate, na The Smurfs Village.
Site na ike ndọda na-agbagharị agbacha ọcha na-agba ịnyịnya dị ka Capitol Bullet Train na The Green Hornet: Chase-Speed ​​Chase ruo ebe nkiri na-emikpu mmiri dị ka Smurf Village Express na Kung Fu Panda: Ọmarịcha enweghị ike, site na ihe ngosi ndụ mmekọrịta na ihe ncheta na nhọrọ iri nri. na ị nweghị ike ịchọta ebe ọ bụla ọzọ -
MOTIONGATE ™ Dubai bụ nleta ga-adịrị ezinụlọ na ndị hụrụ n'anya na-achọ ịhụ anwansi Hollywood n'ezie.
Ogige BOLLYWOOD ™ Dubai
Bụrụ Spellbound na ogige isiokwu mbụ n'ụwa nke a raara nye ihe niile Bollywood! Bie ndụ, mụta, gbaa egwu, ma mee mmemme kaleidoscopic ụwa nke ụlọ ọrụ ihe nkiri ama ama nke Mumbai, yana njem iri na isii na ihe nkiri karịrị mpaghara ise sitere n'ike mmụọ nsọ. A ga-emesokwa ndị ọbịa na ihe ngosi kwa ụbọchị, site na parades ruo ịgba egwu na ahụmịhe ihe nkiri mmekọrịta… atụla egwu ịhapụ ntutu gị wee sonye na!
legoland® Dubai na LEGOLAND® Mmiri mmiri
Bịa nyochaa ụwa ebe LEGO dị® brik na -adị ndụ na LEGOLAND® Dubai, ogige ntụrụndụ kacha mma maka ezinụlọ nwere ụmụaka dị afọ 2-12. Tọọ asọmpi echiche gị n'ihe karịrị 40 njem, ihe ngosi na ahụmịhe ụlọ LEGO nwere. Site na ụdị LEGO 15,000 emere site na brik LEGO nde 60, ala isii nwere isiokwu, yana ngwakọta nke ime ụlọ na n'èzí. Na mgbakwunye, otu afọ nke ihe omume dị egwu!
Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị na -eti okpomoku, fesaa n'ime ụwa LEGO® ihe omume na LEGOLAND® Ogige Mmiri Park mpaghara naanị ogige mmiri a haziri maka ezinụlọ nwere
ụmụaka gbara afọ 2-12. Kwe ka ihe okike gị na echiche gị gafee ihe mmịfe mmiri na ihe nkiri LEGO karịrị 20, gụnyere ọdọ mmiri LEGO Wave, DUPLO® ebe egwuregwu ụmụaka, na wuo-A-Raft River ebe ị nwere ike iche n'echiche wee wuo raft LEGO nke gị. Ọ bụ ebe ọmarịcha na-echere!
Nọrọ nso n'ihe a na -eme
Ọ bụrụ na ị na -echegbu onwe gị maka ịhapụ otu oge ọchị na mkpali, Ogige ntụrụndụ na ebe ntụrụndụ Dubai dịkwa n'ụlọ Lapita ™ Hotel, ebe pụrụ iche nke ndị Polynesia sitere na nchịkọta Marriott mara mma nke ukwuu.. Ndị ọbịa nke ụlọ nkwari akụ ahụ ga-enwe ọ bụghị naanị ohere ịnweta ọtụtụ ogige na-akparaghị ókè n'oge ọnụnọ ha, kamakwa ọ na-enye ekele Q-Fast na MOTIONGATE ™ Dubai na PARKS BOLLYWOODTM Pontooni!
Ịga ebe ahụ
Adaba dị, Dubai A na -arụzi ogige ntụrụndụ na ebe ntụrụndụ site na bọs ọhaneze mgbe niile na -apụ na ọdụ metro kacha nso. Yabụ, zụta tiketi gị taa wee jikere maka ahụmịhe dị ịtụnanya!
By eze 21|2022-05-23T17:53:02+05:30March 30th, 2019|blog|Comments Off na Ahụmahụ dị ịtụnanya na Parks Dubai na Ebe Ntụrụndụ